I-Podcasting iyaqhubeka nokukhula ekuthandeni kunye nokwenza imali | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 12, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Sinezinto ezimalunga nezigidi ezi-4 zokukhuphela iziqendu ezingama-200 + zethu ipodcast yentengiso ukuza kuthi ga ngoku, kwaye iyaqhubeka nokukhula. Kakhulu kangangokuba sityale imali yethu istudiyo sepodcast. Ngokwenene ndikwizigaba zoyilo ze entsha istudiyo esinokuthi ndifudukele ekhayeni lam kuba ndizifumana ndithatha inxaxheba okanye ndisebenzisa ii-podcast ezininzi.
Ukususela ekuqalekeni kwayo okuthobekileyo ngo-2003, i-podcasting ibe yinto engathintekiyo kwintengiso yomxholo kwaye ayibonisi zimpawu zokumisa-inani lee-podcast ezisebenzayo liye laphakama ukusukela ngo-2008. UJon Nastor
Izibalo zePodcasts ze2018
Abaphulaphuli bePodcast bamamela umndilili wemiboniso esi-7 ngeveki, eyi-40% ukusukela ngo-2017
Kukho ii-podcast ezisebenzayo ezingama-550,000 kwiilwimi ezingaphezulu kwe-100 ezinezigidi ezingama-18.5 zeepisodes ezikhoyo kwi-intanethi
Iintlobo ezi-5 eziphezulu ze-podcasting luluntu kunye nenkcubeko, ishishini, umdlalo ohlekisayo, iindaba kunye nezopolitiko, kunye nempilo
I-64% yabantu base-US bayayazi eli gama Podcasting
I-44% yabemi base-US bamamele ipodcast, i-26% yamamela iipodcast inyanga nenyanga, i-17% ngeveki, kunye ne-6% yabalandeli abanomdla.
Inani eliphambili labemi beepodcasts ngabaneminyaka engama-25-34 ubudala, kuhlala kunzima ukufikelela kubemi ngentengiso
Abaphulaphuli bePodcast banamathuba angama-45% okufumana isidanga sasekholejini kunye neepesenti ezingama-37 ngaphezulu zokufumana umvuzo wonyaka wama- $ 100,000 okanye ngaphezulu
Yintoni etshintsha ukuba iiPodcasts zithandwa kangaka?
Ukuguqula iminyaka embalwa kwaye kudla Iipodcast yayingumsebenzi onzima. Ukuba unesixhobo se-iOS, kuya kufuneka ubeke idock kwaye ungqamanisa isixhobo sakho neTunes emva kokubhalisela iipodcast ozithandayo. Nangona kunjalo, njengoko izixhobo zihambele phambili kwaye unxibelelwano lwebhendi ebanzi sele iyinto eqhelekileyo, umchachazo Iipodcast sele iyinto eqhelekileyo. I-Apple ine usetyenziso lweepodcast, kwaye kukho kwakhona Stitcher, TuneIn, IBlogTalkRadio, kunye neeapps ezihambayo zinokudibanisa abadlali ngokulula.
Ngaphandle kokumamela ngexesha lokubaleka ekuseni okanye ukuhamba ngebhayisikile emva kwemini, ukudityaniswa komthungo kwee-smartphones kunye neemoto zenze ukuba ipodcast iphulaphule into ekufuneka uyenzile kusasa nasemva kwemini. Ngokoluvo lwam, ndiyakholelwa ukuba le yeyona ndawo inkulu yokukhula kunye neepodcast zeshishini.
Ayisiyiyo kuphela ukutshintsha kokusebenzisa, kunjalo nangokuziphatha. Njengokuba abantu behlala kwaye babukele iNetflix kangangeyure, sifumanisa ukuba abaphulaphuli bethu bayakumamela iiyure zepodcast yethu kwindawo enye. Hlanganisa oku kunye nomgangatho omtsha wokunxibelelana kwee-odiyo kwiimoto zika-2016 ezinokutya iipodcast… kunye nesandi esifunwayo siza kuthatha into esingazange sayibona ngaphambili!
Kwi Mveliso icala, ipodcasting iya isiba lula. Yayidla ngokufuna istudiyo esinobungqina besandi, iimakrofoni ezibiza kakhulu, kunye nomxube wokurekhoda… emva koko uyigqithisele kumhleli weaudiyo ukuze usete kwaye wenze i-tweak. Kutshanje ndiye ndenza ezinye iipodcast endleleni nge Zoom H6 irekhoda kunye neseti ye Shure ii-microphone ze-SM58 - kunye nokucaca kweepodcast kwakumangalisa. Heck, ungaqala nge Inkqubo ye-anchor podcast, kunye ne-headset yeBluetooth elungileyo isebenza kakuhle.
Ukusetyenziswa kwemithombo yeendaba kubonisa iimpawu zokutshintshwa ngokuphawulekayo bobuchwephesha kunye neparadigms ezintsha. Ukusetyenziswa kweselfowuni okwandayo 'njengesikrini sokuqala,' kunye nokunyuka kwezinye iifom zomxholo, ezinje ngee-podcast kunye nomxholo 'onokuzibophelela' kwiinkonzo zevidiyo ezifunwayo kugxotha intsomi yokuba ixesha lethu lokujonga lifutshane. UTom Webster, uSekela Mongameli weQhinga likaEdison
Emva kweminyaka emininzi kangaka yepodcasting, ndikwafumana ingeniso efanelekileyo ngabaxhasi abathile (enkosi ku Yazisa ngentengiso). Kuba ii-podcast zam zinokufumana i-10k + ukumamela kwezi nyanga zimbalwa zizayo, abathengisi bahlawula amakhulu amawaka eedola kwisiqendu ngasinye. Oko kusenokungavakali ngathi kuninzi, kodwa kwenza ixesha elifanelekileyo lokucwangcisa, ukurekhoda, kunye nokupapasha iipodcast. Kwaye ngokungafaniyo nesicatshulwa kunye nevidiyo, ipodcasting intle kakhulu ngentengiso kuba unomphulaphuli Ewe ndiqinisekile ukuba abathengisi bam bayabaluleka kwaye babalulekile kubaphulaphuli bam-ndicinga ukuba sisitshixo eso. Awuyi kundiva xa ndizama ukuthengisa oomatrasi kwam Udliwanondlebe lokuthengisa!
Ukuba azikho iipodcast ezithandwayo kwishishini lakho, eli lixesha lokuqala! Konke kuphakeme apha!
tags: 2018uphando lwe-edisonIABIntengiso yePodcastimboncinielsenumxholo we-pacificIindidi zepodcastUkusetyenziswa kwepodcastUkukhula kwepodcastmanani epodcastizibalo zepodcastistudiyo sepodcastPodcastingukukhula kwepodcastingmanani epodcastingPWC